Dadka taageersan xisbiga SD oo ku soo badanaya xubnaha ururada shaqaalaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka taageersan xisbiga SD oo ku soo badanaya xubnaha ururada shaqaalaha
La daabacay måndag 18 november 2013 kl 14.51
Sida ku cad tirakoob baaritaan oo ay sameysey shirkadda, lixdii qof oo xubin dalladda ururada shaqaalaha ee LO mid ayaa taageersan xisbiga Sverigedemokraterna. Taasina waxay hadda ku kalliftey hoggaanka dalladda ururada shaqaalaha ee LO ay bilaabaan mashaariic kala duwan oo ay doonayaan in ay taas wax uga qabtaan, laakiin sida ay muuqato saameyn sidaas u soo weyn kuma yeelan xubnihii ururka oo la isku dayey in lala xiriiro. Sidaasna waxaa idaacadda telefishanka ee SVT.
Dalladda LO waxay qabanqaabisaa koorsooyin, aqoon-isweydaarsiyo iyo kulano looga hadlayo isu dulqaadashada iyo in dhammaan dadku isku qiimo leeyahay. Waxayna iskaashi dhow la leeyihiin ururka Expo oo ay ku wada wareegaan goobo badan oo shaqo oo ku yaal dalka oo dhan. Ujeeddada ayaana ah in la ururiyo ra’yiyo looga hortegayo xisbiga Sverigedemokraterna. Balse ilaa hadda wax natiijo ah lagama gaarin. Intii muddo ahba wuxuu ahaa xisbiga Sverigedemokraterna xisbiga labaad ee taageerada ka hela xubnaha dalladda ururada shaqaalaha ee LO, iyadoo kaalinta koowaad uu ku jiro xisbiga Socialdemokraterna.
Dhawr arrimood ayaa loo aaneynayaa sababta uu xisbiga Sverigedemokraterna taageerada xooggan uga haysto xubnaha ururada shaqaalaha. Midi waxay tahay shaqaalaha dalka dibeddiisa laga soo waaridaayo. Goobo badan oo shaqada waxaa ka jira dareen ah in shaqaalaha laga keeno dalalka kale ay halkaan u yimaadaan in ay shaqooyinka kala wareegaan ”dadka iswiidhishka ah". Dalladda ururada shaqaaluhu waxay taageersan tahay in shaqaale dibedda laga keeno, laakiin waxay haddana dooneysaa in lagu adkeeyo muwaadiniinta ajnebiga ah in ay helaan ruqsadda shaqooyinka ay dadka doonaya badan yihiin.
Waxaa hadda hoggaanka LO madax-xanuun ku haya dhabbaha ay dad badan oo xubnaha ururada shaqaalaha ka mid ah qaadayaan mar haddii doorashadii sannadka dambe foodda nagu soo hayso. Boqolkiiba 16.8 ee xubnaha ururada shaqaaluhu waxay sheegeen in ay ku talajiraan in ay u codeeyaan xisbiga Sverigedemokraterna, taasina tiro u dhiganta lixdii qofba mid.. Ragga da’doodu u dhexeyso 18 ilaa 49 sano boqolkiiba 30 ayaa taageersan xisbiga Sverigedemokraterna. Sidaasna waxaa lagu muujiyey tirakoob laga helay shirkadda Sifo. Guud ahaan dalkana waxaa taageersan boqolkiiba 30.